Cabdiraxman Cabdishakur; “Hubkii ciidanka ee loogu tala galay in lagula dagaallamo Al-Shabaab, dowladdu waxaa ay geysay Dhuusamareeb” – Kalfadhi
Cabdiraxman Cabdishakur; “Hubkii ciidanka ee loogu tala galay in lagula dagaallamo Al-Shabaab, dowladdu waxaa ay geysay Dhuusamareeb”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku tilmaamay weerar xalay lagu qaaday xarunta Ahlu Sunna ee magaalada Dhuusamareeb inuu yahay mid lagu galay dambi dagaal.
Akhriso Warka uu saaray Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Waxaa ilo xog-ogaal ah ii xaqiijiyeen in shalay galab dawlada federaalka ah Dhuusamareeb ka dejisay hubkii ciidan ka Gaashaan lahaayeen ee loogu tala galay in Alshabaab looga saaro Hoteelada ay qabsadaan. Waa hub derbiyada duleeliya, laaguna tala galay in meeshii lagu rido aanay suntiisa cidna ku noolaan, wuxuuna gubayaa qofkii uu gaaro ama ku ag dhaco.
Hubkaas iyo wiilashii ciidanka Gaashaan oo loogu tala galay la dagalaanka Alshabab amarkiisa waxaa si wadajir ah u go’aamiyey madaxweynaha, raysalwasaaraha iyo taliyaha nabadsugida. Waa in la ogaado in xasuuqii xalay Dhuusamareeb ka dhacay uu danbi dagaal yahay.
Dawlada Federaalka ah iyo dadkii ka soo horjeeday Ahlusunna waxay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhalinyaradii sanadaha badan deegaanka ka ka hortaagnaa Alshabab, iyo xaqiraada lagula kacay hogaankii Ahlusunna. Dawlada Federaalka ah iyadoo heli kara wado waan waan iyo wadahadal ah ayey dagaal iyo colaad ka doorbiday. Waa wado ay sedaxdii sano ee na dhaaftay ku taagnayd.
Hogaanka Ahlusunna maalintii ay tabarta hayeen way tala diideen, waxayse su’aashu tahay inta kale ee maanta weli tabarta haysa, ma haleeli doonaan talo ay xasuuqa iyo xaqiraada ku soo fool leh isaga badbaadiyaan?
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo casuumaad ka helay dhigiisa dalka Jabuuti